Jileeyaha Barreegga Baarkinka
Qalabka bireega mootada Mootooyinka way ka yar yihiin baabuurta, sidaas darteed waxay u baahan yihiin awood yar oo bareeg ah. Si kastaba ha ahaatee, siyaabaha qaarkood, awoodda mootada in ay hoos u dhigto ama joogsato ayaa ka muhiimsan baabuurta kale. Waxaa laga yaabaa inaad taas waydiiso? Hagaag, xitaa qaloocyada xayndaabyada yaryar waxay noqon karaan kuwo dilaa ah sababtoo ah darawalku maaha ...
Xakamaynta bireega ayaa aad muhiim ugu ah awoodda baabuurka, waxaana la odhan karaa waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee baabuurka. Si kastaba ha ahaatee, baabuurta intooda badan maanta waxay leeyihiin biriiga disc, ugu yaraan for taayirrada hore. Laakiin hadda baabuur badan iyo kuwa xamuulka qaada ayaa sidoo kale ku isticmaala biriiga dambe. In a...
Haddii aad wax su'aal ah qabto, fadlan u dhaaf fariintaada ama la xidhiidh sales@ktg-auto.com oo faahfaahsan.